Kuchengeterwa pahotera pamhepo pamutengo wakanakisa, usabhadhare yakawanda yezororo rako
Shandisa injini yekutsvaga ku bhuku hotera yako
Uri kufunga kutora rwendo here uye usingazive pekutangira? Zvakanaka, sekutaura kwenyaya huru, tichazviita kubva pakutanga. Imwe yekutanga kunetseka yatinayo ndeye bhuku mahotera. Pasina kupokana, tinogara tichida tsvaga hotera dzakachipa vane mamiriro akakwana kuitira kuti kugara kwedu kusakanganwika. Nhasi tinokubatsira nazvo!
Dzvanya apa kubhuka pamitengo yakanakisa paInternet
Maitiro ekuwana mahotera anodhura pane internet
Kana zvasvika pakutsvaga hotera yakanaka yezororo redu rinotevera, hatichazofaniri kupedza maawa tichitarisa divi kana rimwe racho. Iye zvino unogona kutarisa zvese zvaunoita pane mamwe mabasa anonakidza.
Kana iwe usina hotera chaiyo mupfungwa, zvibvumire kutungamirirwa neyedu injini yekutsvaga. Mune ino kesi, ichave iri inokurumidza uye yakapusa nzira yaunofanirwa kuwana iyo ruzivo rwese mukungodzvanya kamwe chete.
Imwe sarudzo yekutsvaga iyo top hotels Icho chiri mumasangano kuburikidza neInternet. Ehezve, zvakare, iwe unofanirwa kufunga kuti chero nguva paine vamiririri verudzi urwu, mitengo inokwira.
Unogona enda kuhotera peji Ehezve, dzimwe nguva, ivo havawanzo kukupa iwe zvakanakira kana mitengo iyo isu tinogona kuonaese.
Matanho ekutanga ekutsvaga emahotera anodhura pamhepo
Mapati: Isati yasvika gadziraZvinogara zvakanaka kudzidza zvishoma iyo nzvimbo kwatiri kuenda kuzororo. Tarisa ruzivo kana paine chero mhando yechiitiko munzvimbo iyoyo yakasarudzwa. Izvi zvinodaro nekuti kana zvirizvo, mitengo yacho inodhura.
Madhorobha epedyo: Kana iwe pakupedzisira ukawana izvo, mune izvo mazuva ezororo rako, iko kuenda kuri mupati nekuti iwe unofanirwa kutsvaga imwe nzira. Pfungwa yakanakisa ndeyekusarudza mataundi akapoterera. Nenzira iyi, tichava padhuze uye tinoshandisa zvishoma muhotera.
Mberi: Pasina kupokana, patinenge tatoziva uye tichinyatsojekesa nezve kwatiri kuenda, saka zvakanakisa kuita kuchengetedza kwacho munguva pfupi. Kufambira mberi kunogona kutinunura kubva pakupera kunze kweye yekurota kamuri. Tarisa uone ese-anosanganisira hotera madhiri kana nebreakfast chete. Nekuda kweizvi, isu tinogona ikozvino sarudza zvichienderana nezvatinoda.
Mahostela kana mapensheni: Isu tatoziva kuti tese tinogona kurota kwehotera huru, asi zvirokwazvo kune vazhinji vedu, zvinogona kubuda mubhajeti. Saka, inguva yekuisa tsoka dzako pasi uye wotsvaga dzimwe nzira. Kana iwe uchizoshandisa zuva rese kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe, zvakanakisa kusarudza izvo zvinopihwa muhotera. Zvakanakisa zvichave mune anonzi mahostel kana mapensheni. Nzvimbo dzakanaka dzekugezera nekuzorora zvakakwana maawa.
Vana vakasununguka: Kana iwe uri kufamba nevana, zvakakodzera kuti utarise izvo zvingasarudzwa zvinotibvumira kudzikiswa kwemutengo. Zvichienderana nezera, pane zvakawanda zvakachipa hotera Ivo havazokubhadharise iwe kuti mudiki avate mukamuri imwechete. Iwe unongofanirwa kutarisa padhuze mutemo wavo wemamiriro.
Maitiro ekubhuka hotera pamhepo?
Nhasi tine rombo rakanaka kuve neinternet. Pasina kupokana, chimwe chezvishandiso zvakanakisa kuita kuti hupenyu huve nyore. Pakufamba, tinoonawo denga rakavhurika mukati maro. Unoda bhuku hotera yacho online? Zvakanaka, zviri nyore.
Kana iwe watotarisa uye iwe uchitova nehotera iwe yaunoda yezororo rako, saka rinotevera danho nderekugadzirisa. Kuti tisaite kutendeuka kusingafungi, takasarudza injini yekutsvaga ()tinya pano kuti uwane uye ubhuke pamutengo wakanakisa). Anozotiitira rese basa. Isu tinongoda kupinda kwekuenda uye ndizvozvo. Kana iwe wakasarudza iyo, iwe uchave wauya neakawanda hotera sarudzo. Pakati pavo, unogona kuona zvese hunhu. Kubva panzvimbo kuenda kumifananidzo inopinza kuti uwane zano. Paunenge iwe waita yako pfungwa, iwe uchafanirwa kusarudza iyo inogutsa iwe zvakanyanya. Nekudzvanya pane iyi sarudzo, iwe unowana peji nyowani kuti ugone sarudza kamuri. Ikoko unogona kutarisa ese akasununguka pamwe nemazuva aripo. Ruzivo urwu rwese, unogona kurisarudza nenzira yakapusa uye kubva pasofa rako. Paunenge uine zvese zvakafukidzwa, iwe unongofanirwa kubvuma kubvuma uye kuisirwa kuchashanda.
Ongororo yehotera pamhepo
Imwe yesimba pakusimbisa nzvimbo kuhotera ndeyekuverenga zvishoma pfungwa dzinosiiwa nevatengi. Ehezve, ivo havasi ivo vanogara vakabudirira zvakanyanya uye ndezvekuti, mune zvekuravira hapana anotonga. Zvakadaro, iwe unogona kuwana pfungwa yezvinhu zvakajairika munzvimbo yawakasarudza. Semutemo wakajairika, zvinhu zvakaita sekuchena uye ruzha zvinowanzo kutaurwa. Piri makiyi akakosha kana zvasvika pakusarudza imwe nzvimbo kana imwe.
Kune rimwe divi, zvakakoshawo kuti vave ne 24 awa yekugamuchira. Kupfuura chero chinhu nekuti hatizive kuti tichasvika riini uye kamwe munzvimbo, zvirokwazvo tichava nenguva yakawanda kunze kunze kwemukati. Nenzira imwecheteyo, zvinodikanwa kuti ubvunze nezve zvivakwa uye mashandisiro akanaka akaitwa navo. Tichawanawo izvi sekuwongorora mu mapeji ekutaura. Dzimwe nguva zvinokwanisika kushandisa nguva shoma kuverenga, sezvo iwe uchizoona kuti ruzivo rwacho rwunotanga kuzviratidza sei. Iyo yakanaka nzira yekuwana pfungwa yenzvimbo, usati wavepo.